July Dream: Craving Myanmar food
Posted by JulyDream at 4:21 PM
(လွမ်းတယ်ဆိုတာ သတိရတယ်... ဆိုတာထက် ပိုတယ်ဆိုတာကို ချစ်သူရှိတဲ့သူတွေ သိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း သိပါတယ်။)
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာလည်း ချစ်သူ ရှိပါတယ်။
(မုန့်ဟင်းခါးကိုလည်း လွမ်းမိနေတယ်။ အလွမ်းပြေအောင် ပင်နီဇူးလားမှာ သွားစားပါလားလို့ အကြံမပေးကြပါနဲ့။ အလွမ်းမပြေတဲ့အပြင် မြန်မာပြည်က မုန့်ဟင်းခါးကို ပိုတောင် လွမ်းသွားပါမယ်။) မှန်လိုက်လေ။
ကိုယ်ကတော့ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ ကြာဇံချက်ကို အိမ်ပြောင်းပြီးမှ မလွမ်းတော့ဘူး။ အခန်းဖော်တွေ ခဏခဏချက်တာ ကပ်စားနေရလို့။
အိုးကြီးချက် ဆရာ! ရှယ်ပဲ!
ကိုယ်ဝန်ကြီး ဗိုက်နဲ့ >>>>
အဟိ.. လူကြမ်းဂိုက်နဲ့ ဗိုက်ကြီးသည်ကို မြင်ဖူးချင်ထှာ ။
သိပါတယ် ဒါက ကိုဇူလှိုင့် အလွန် မဟုတ်ပါဘူး၊ ပရောဂ ကိုင်တယ် ခေါ်တယ်။ :))
စားစရာတွေ လွမ်းထှာ မဗိုက်ရယ် အဲ ဂျူလိုင်ရယ်..
လွမ်းသွားတယ် စားစရာတွေကို သူပြောမှ ပိုလို့လွမ်းမိတယ် အိုးဘဲဥရယ် အဲယောင်လို့ ကိုဗိုက်ရယ် အဲမှားပြန်ပေါ့ ကိုဂျူလိုင်ရေ...
လွမ်း……….အင်း...... Default setting ကပါလာပြန်ပြီ။
ကြာဇံစွန်တို.........မီးစွန်တို...............တို့သိတာ မီးဆိုတိုပါ။ အင်းသိပြီး. သူက အသံနဲနဲဝဲတယ်။
မုန့်ဟင်းခါလွမ်းရင် မြောင်းမြဒေါ်ချိုတို့.. ခင်တွေးရီတို့စားပါလား.ကောင်းပါတယ။် အကြော်လေး တစ်ထုတ် ပဲကြော်ထုတ် ပါဝယ်ခဲ့။ ငှက်ပျောအူလည်းတစ်ကျပ်ဘိုး.ဝယ် ရှယ်ဘဲ။ တို့ကို ဖိတ်ပါ။
လမ်းဘေးဆိုင်ထိုင်ခဲ့တုံးကတော့ပန်းကန် အစုတ်ကလေးတွေ ကြည့်ပြီး ရေခွက်ထဲစိမ်ထားတာကြည့်ပြီးအ တော်အသည်းယားခဲ့မိတယ်။
ရန်ကုန်က ပလာတာ လား ဆီရွှဲနေတာဘဲ သတင်းစားနဲ့ညှစ်ပြီး ဆီ ကို စုပ်ထုတ်ပြီးမှ စားရဲတယ်။
ချဥင်္ချင်းတက်နေတယ်ဆိုလို့မသင်္ကာဖြစ်နေတာ. အဆုံးသတ်မှ သိ့ရတယ်။
စားချင်တာတွေ သတိရတာတွေ..လွမ်းတာတွေ ချစ်တာတွေ ဖတ်သွားပါတယ်..(တော်သေးတယ်..ဆွေးတာ မပါသေးလို့..မဟုတ်ပြိုကျနေဦးမယ်)
ဘာစားမလဲ ကို..။ လို့ နောက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတည်လွမ်းနေတယ်ဆိုတော့ မနောက်တော့ပါဘူး။
မဟုတ်ပါဘူး.. အလွန်မဟုတ်ပါဘူး..း)))....
မီးရုဘု Meerubu စားကြည့်ပါလား ငါးနဲ့ ချက်တာ မုန့် ဟင်းခါးနဲ့ တူတယ်
အစားအသောက်စိတ်မဝင်စားဘူးဆို.. ခုတော့ ဗုိုက်ကြီးသည်လုံးလုံးပါလား
ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် အလွမ်းအပြစ်ပါ :)
ဂျူလိုင် လည်းအတော်ကိုလွမ်းနေတာပါလား။ စားချင်တာ တွေကိုစာရင်းလုပ်ထားပြီး ပြန်လာမှအတိုးချစားပေတော့ ဂျူလိုင်ရေ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ကိုဂျူလိုင်ရေ.. အလွန်အကျွံတော့ မလွမ်းမိစေနဲ့ဗျ..ဟဲဟဲ လွမ်းတတ်တဲ့ သူချင်းမို့.. အတူတူ လာလွမ်းတာ
ရန်ကုန်က လမ်းဘေးအကြော်ဆိုင် (အပြိုင်ကိုလွမ်းသွားတယ်)
ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိလို့ ပိုပြီး ဗိုက်ဆာသွားပြီ။ တခုခု သွားစားမှ ဖြစ်တော့မယ်။
စားစရာတွေထဲမှာ အော်ကေ့ကြည် ကို ကြွပ်အောင်ကြော်ပြီး ဆိုးဆေးပါတဲ့ အချဉ်ရည်
နီနီရဲရဲနဲ့ စားရတာ အလွမ်းဆုံးပဲ...
ဒီမှာ ကျန်တာတွေ ဘယ်လို ရရ ဘယ်လောက်တူတူ ဆိုးဆေးအချဉ် နီနီကတော့ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူး...
မြန်မာပြည်က စားစရာတွေကို လွမ်းနေတာ ကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ် ကိုယ့်လိုပဲ လွမ်းနေကြသူတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးလားလို့ တွေးပြီး စိတ်ကို ဖြေပါလေ...
ဖတ်ပြီး ကျနော်တောင် လွမ်းသွားပြီ
အခုမှ မုန့်ဟင်းငါး ဗူးငါးဖယ် အိုးဘဲဥ နဲ့ အဝစားလာတာ